Maxaa ka jira in muus cudur wata oo Soomaaliya laga qaaday la geeyay dalkaas? - Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Maxaa ka jira in muus cudur wata oo Soomaaliya laga qaaday la...
Maxaa ka jira in muus cudur wata oo Soomaaliya laga qaaday la geeyay dalkaas?
Muuqaal uu ku lammaanaa qoraal ayaa si weyn loogu dhex faafiyey baraha bulshada ee dalka Koonfur Afrika, iyada oo lagu sheegay in mooskan dhawaan laga keenay Soomaaliya uu ku jiro gooryaan la yidhaahdo Helicobacter, islamarkaasna uu sitto bacteria xanuuna keenta.
Qoraalkaas ayaa sheegayay in 12 saacadood ka dib isticmaalka mooskaas , qofku uu u dhiman doono xanuunnadu maskaxda.
Dawladda dalkaas, ayaa beenisay warkaas iyaga oo bulshada u ballan qaaday in mooskaska yaalla dalkaas uu yahay mid caafimaad qaba, isla mar ahaantaana lagu iibiyaa ay yihiim kuwo ammaan oo caafimaad ahaanna la cuni karo.
Waxaana sheegashada in khudaartaas “laga keeno Soomaaliya” lagu tilmaamay war been abuur ah.
Waaxda Beeraha, Dib-u-habaynta Dhulka iyo Horumarinta Reer Miyiga ee dowladda Koonfur Afrika ayaa sheegtay inay “canbaaraynayso, iyadoo adeegsanaysa ereyada ugu adag, wararka been abuurka ah ee ku saabsan Mooska Soomaaliya laga keeno”. sida ay warbaahinta gudaha ee Koonfur Afrika kasoo xigatay waaxdani.
“Ma jirto wax muus ah oo dhawaan laga soo dejiyay dekadaheenna oo ka yimaadda Soomaaliya,” ayay si cad u sheegtay, sida lagu faafiyay wargeyska Sunday Times, boggiisa Timeslive.co.za
Dembigii mooska ka bilowday ee ku dhammaaday $1,628 oo ganaax ah
Raashinka dalka loo soo dhoofiyo si taxadar leh ayaa loo shaandheeyaa, afhayeenka waaxdaas Reggie Ngcobo ayaa u xaqiijisay macaamiisha
“Waaxdu waxay sii waddaa inay si feejigan ula socoto cuntooyinka dalka soo gala, badeecad kasta oo looga shakiyo inay khatar ku tahay ama waxyeello u geysanayso bulshada iyo dhulkayaga, looma oggolaan karo inay soo gasho Jamhuuriyadda ama lagala baxo. haddii khatartan oo kale la ogaadana si habboon ayaa tallaabo looga qaadaa” ayay sheegtay wasaaradda
“Waaxdu waxay sheegtay in Koonfur Afrika ay nidaamiso soo dejinta dhirta iyo wax-soo-saarkeedaa iyadoo la eegayo Xeerka Cayayaanka Beeraha, 1983 (Xeer No. 36 ee 1983) iyo xeerarkeeda la xidhiidha, kuwaas oo u baahan in badeecadaha la soo dejiyo lagu kormeero dekedaha ama, wixii laga shakiyana la galiyo karantiil,” ayaa lagu yidhi bayaanka.
Sida ay sheegeen Khubarada xagga cuntadda, waxaa mooska ku badan walaxda macdanta Potassium, oo jirka bini’aadamka u baahan yahay sida ay sheegtay Catherine Collins, oo ka tirsan Isbitaalka St George ee London
Qaar ka mid ah dadka qaxootiga ah ee reer Suuriya ayaa wajahaya in laga musaafuriyo turkiga kaddib markii ay moos u cuneen qaab caro abuuraya
Haddaba, mooska waxa ku jira walxo shucaaca nukleeriga ah leh oo aan aad u badanayn, dhibaatana aan u lahayn cafimaadka iyo nolosha qofka midna.
Mana jirto dhibaato gaar ah oo mooska uu leeyahay.
Xilligan casriga mooska ayaa lagu daraa, khudaarta sii dabar go’aysa.
Waxaa lagu sababeeyaa in aan moosku lahayn wax iniin ah oo sahli karta in la sii beero.
Dad cilmi baadhayaala ah ayaa ku mashquulsan sidii ay xal ugu heli lahaayeen.
Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka hodanka ku ah mooska, waxaana xilliyadii dawladdii Siyaad Barre marar badan loo dhoofin jirey debedda.
Muddooyinka danbe se badanaa lama arko cid dhoofinaysa mooska, inkasta oo ay suuragal tahay in ay jiraan shirkado si khaasa uga ganacsadaa.
Previous articleIsrasaaseyn ka Dhacday Guri-ceel Oo Khasaare Nafeed Gaysatay
Next articleMadaxweynaha Somaliland oo xilka qaadis iyo Magacaabis sameeyay